Soo dejisan Razer Cortex 1.0.87.116 – Vessoft
Soo dejisan Razer Cortex
Bogga rasmiga ah: Razer Cortex
Razer Cortex – software si loo hagaajiyo waxqabadka nidaamka iyo in la xushmeeyo gameplay. Razer Cortex wuxuu kuu ogolaanayaa inaad fuliso qaabka badan ee kombiyuutarka ee qaabka tooska ah ama qaabka buuggan, adoo adeegsanaya adeegyo aan loo baahnayn, dhammeystiraya geeddi-socodka taariikhda, nadiifinta RAM, kor u qaadida waxqabadka processor, iwm. Cortex Razer wuxuu awood u leeyahay in uu si toos ah u soo celiyo faylasha doorashada celinta calaamada dariiqa mar kasta oo aad badbaadiso horumarka. Software sidoo kale kuu ogolaanayaa in aad soo qabato fiidiyooga shaashadda, samee shaashadaha iyo muujiyaan tirada muraayadaha wareega labaad.
Waxqabadka habka kor u kacay
Captures video ka screen
Awoodda lagu keydiyo faylasha kaydinta daruurtu
Faallo ku saabsan Razer Cortex
Razer Cortex Xirfadaha la xiriira
Qalab ku haboon si loo casriyeeyo darawallada kaarka muuqaallo kale shirkadda NVIDIA. software The kuu ogolaanayaa inaad dhigay goobaha si mug leh for the kulan caan ah.
Agabka in la dedejiyo loading ee nidaamka qalliinka. software The kuu ogolaanayaa inaad si loo kordhiyo waxqabadka iyo ogaado khilaafka u dhexeeya geedi socodka ama adeegyada.
software The si aad u eegto, edit iyo badalo sanamyadii. software The taageertaa qaabab waaweyn graphic iyo leedahay hawlaha badan oo kala duwan.
Maamulayaasha password, Fariin
software The badasha qoraalka iyo files graphic si format PDF adigoo isticmaalaya madax bannaan abuuray printer dalwaddii.
Software in aan kala tagno files Qaybo oo ay ku biiraan iyaga intaas ka dib. Software taageertaa files of tirada iyo qaabab kala duwan.
Kormeerka & Falanqaynta
Tani waa sahlan in la isticmaalo scannada shabakadda si loo falanqeeyo shabakadaha maxaliga ah, iyada oo la adeegsanayo hawlaha loogu talagalay kumbuyuutarka fog.
software ah in nuqul ka iyo guuraan files si deg deg ah. Dhismaha ee software-ka waxaa ka mid ah sifooyinka badan oo kala duwan in ay bixiyaan dhaw raaxadeeda waxa ugu badan ee koobiyeynta ah.
Software ayaa go’aamisa xogta farsamada ee xubno ka qayb kombiyuutarka ah. Utility ayaa ku siinayaan shaqada leh noocyo badan ka kooban kooban.
Tani waa maamulaha sirta si uu u keydiyo macluumaadka qarsoodiga ah ee user oo si toos ah u buuxsamo webformyada leh shakhsi shakhsi ahaaneed.
The editor text functional. software waa ay awoodaan in ay qabtaan hawlaha aasaasiga ah ee editor ah iyo astaysto hab u hawlgasho afka barnaamij gaar ah ah.
software The in ay qabsadaan video ka screen oo waxaad ka samaysaa Screenshot ah. software The kuu ogolaanayaa inaad Customize goobaha badan ee qabashada screen baahida user ee.